एन्ड्रोइडका लागि Beamng Drive Apk डाउनलोड [खेल] - लुसो गेमर
एन्ड्रोइडका लागि Beamng ड्राइभ एपीके डाउनलोड [खेल]
डिसेम्बर 25, 2021 by जोन स्मिथ
यद्यपि हामीले पहिले नै विभिन्न रेसिङ र कार खेलहरू सुनेका छौं। जुन लोकप्रिय थिए र अझै पनि ती मध्ये केहि गेमरहरू बीच प्रचलनमा छन्। तर आज यहाँ विकासकर्ताहरूले Beamng Drive Apk नामक नयाँ र अद्वितीय संरचना बनाएका छन्।
भित्र RPG खेल, गेमरहरूलाई विभिन्न सिमुलेशन मोडहरूमा भाग लिन र कार क्र्यास भएको हेर्न निर्देशन दिइन्छ। यद्यपि, क्र्यास हुने प्रक्रिया केही खेलाडीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। तीहरूलाई, हामी क्र्यास मोडबाट बच्न र रेसिङ मोड चयन गर्न सिफारिस गर्छौं।
यदि तपाईं विभिन्न सवारी साधनहरूको प्रत्यक्ष दुर्घटना सिमुलेशनको मजा लिन तयार हुनुहुन्छ भने। त्यसपछि यो गेमप्ले विशेष गरी तपाइँको लागि संरचित छ जुन अनन्त सम्भावनाहरू प्रदान गर्दछ। यसरी तपाइँ गेमप्ले र यसको खेल शैली मनपर्छ त्यसपछि Beamng ड्राइभ खेल स्थापना गर्नुहोस्।
Beamng Drive Apk के हो
Beamng Drive Apk युआन हाउ द्वारा विकसित अनलाइन प्लस अफलाइन सिमुलेशन गेमिङ अनुप्रयोग हो। यो उन्नत सिमुलेशन गेमप्ले प्रदान गर्नुको कारण लाइभ सिमुलेशन मोड प्रस्ताव गर्नु हो। जहाँ सहभागीहरूले प्रत्यक्ष दुर्घटना क्षणको मजा लिन सक्छन्।
यसअघि धेरै अन्य रेसिङ र कारसँग सम्बन्धित खेलहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। जुन खेलमा राम्रो छ र रेसिङका लागि धेरै ट्र्याक मोडहरू प्रदान गर्दछ। तर जब यो दुर्घटना दृश्य र गाडीको शक्तिको मजा लिन आउँछ। त्यसपछि ती गेमिङ एपहरूमा यो विकल्पको अभाव हुन सक्छ।
यसबाहेक, यसले खेलाडीहरूलाई गाडीको कमजोर बिन्दुहरू जाँच गर्न र विश्लेषण गर्न अनुमति दिन सक्दैन। अब यो विशेष गेमिङ एप भित्र, खेलाडीहरूले संरचित ड्रीम कारको विश्लेषण गर्न सक्छन्। यसबाहेक, गेमरहरूले विभिन्न मोडहरूमा गाडीको शक्ति पनि जाँच गर्न सक्छन्।
साथीहरूलाई आमन्त्रित गरेर खेल्ने प्रक्रिया र भित्रको आनन्द बढाउन सकिन्छ। यद्यपि विकासकर्ताहरूले दाबी गर्छन् कि उनीहरूले यो मल्टिप्लेयर विकल्प प्रस्ताव गर्छन्। यद्यपि, हामी यो विशेष विकल्पको बारेमा निश्चित छैनौं। यदि तपाईं साथीहरूसँग गेमप्लेको मजा लिन तयार हुनुहुन्छ भने Beamng ड्राइभ एन्ड्रोइड डाउनलोड गर्नुहोस्।
नाम Beamng ड्राइव
आकार 22 एमबी
विकासकर्ता युआन हाउ
प्याकेज नाम com.beam.NGDriveV1
आवश्यक एन्ड्रोइड ..2.3.। र प्लस
श्रेणी खेल - सिमुलेशन
खेल खेल्दै गर्दा हामीले भित्र धेरै बिभिन्न विकल्पहरू भेट्टायौं। ती रेसिङ मोडहरू, ग्यारेज, मद्दत केन्द्र, सेटिङ, नयाँ, क्रेडिट र थप समावेश छन्। प्ले विकल्पले गेमरहरूको लागि भित्र तीन प्रमुख मोडहरू प्रस्ताव गर्न सक्छ।
ती तीन मोडहरूमा परिदृश्य, फ्रीरोम र द्रुत प्ले समावेश छन्। प्रत्येक मोडले खेलाडीहरूलाई एक अद्वितीय अनुभव प्रदान गर्दछ। यो खेलाडीमा भर पर्छ कि ऊ कुन मोडमा अन्वेषण गर्न तयार छ। भित्र पुग्न सकिने प्रमुख गेमिङ मोडहरूमा ड्राइभिङ अनुभव, कार क्र्यासिङ, सिमुलेशन र कार चयन समावेश छ।
याद गर्नुहोस् प्रत्येक मोडको आफ्नै उद्देश्यहरू छन्। ड्राइभिङ अनुभव मोडले एक सहज ड्राइभिङ ट्र्याक प्रदान गर्नेछ जसले गेमरहरूलाई उनीहरूको ड्राइभिङ कौशल जाँच गर्न अनुमति दिन्छ। सहभागीहरूले पनि मुख्य सेटिङहरू परिमार्जन गर्न र कठिनाई स्तर सुधार गर्न सक्छन्।
कार क्र्यासिङ सबैभन्दा राम्रो लाइभ मोड हो जहाँ गेमरहरूले धेरै कारहरू क्र्यास गर्ने मजा लिन सक्छन्। विकासकर्ताहरूले लगभग 26 कार मोडहरू भित्र थपे। अब उपलब्ध सवारी साधनहरू मध्ये कुनै पनि चयन गर्नुहोस् र प्रत्यक्ष दुर्घटनाको आनन्द लिनुहोस्। सिमुलेशन सुविधा पहिले नै छलफल गरिएको छ।
कार चयन भनेको सवारी साधनहरूको विविध संग्रह हो। हामीले यहाँ उल्लेख गरिसकेका छौँ कि 26 विभिन्न कारहरू छनोट गर्न तयार छन्। केवल निम्न पहुँचयोग्य सवारी साधनहरू चयन गर्नुहोस् र एक सहज प्रत्यक्ष सिमुलेशनको आनन्द लिनुहोस्। यदि तपाइँ गेमप्ले मनपर्छ भने Beamng ड्राइभ डाउनलोड स्थापना गर्नुहोस्।
गेमिङ एप पहुँच गर्न निःशुल्क छ।
खेल स्थापना लाइभ सिमुलेशन मोड प्रदान गर्दछ।
यसले खेलाडीहरूलाई धेरै कार मोडहरूको आनन्द लिन अनुमति दिन्छ।
ती दृश्य, FreeRoam र द्रुत प्ले समावेश छन्।
26 भन्दा बढी विभिन्न वाहनहरू पहुँचयोग्य छन्।
तेस्रो-पक्ष विज्ञापनहरूलाई अनुमति छैन।
खेल इन्टरफेस सरल छ।
Beamng ड्राइभ एपीके कसरी डाउनलोड गर्ने
यदि हामी Apk फाइलहरूको अद्यावधिक संस्करण डाउनलोड गर्ने बारे कुरा गर्छौं। एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रो वेबसाइटमा विश्वास गर्न सक्छन् किनभने यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा हामी केवल प्रामाणिक र मौलिक एपीके फाइलहरू प्रस्ताव गर्दछौं। प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न।
हामीले विभिन्न जुलुसहरू सम्मिलित विज्ञ टोलीलाई काममा राख्यौं। जबसम्म टोली गेमिङ एपको सहज सञ्चालनको बारेमा निश्चित छैन। हामीले एन्ड्रोइड गेमरहरूका लागि डाउनलोड सेक्सन भित्र गेमिङ एप कहिल्यै प्रस्ताव गर्दैनौं। गेमिङ एप डाउनलोड गर्न तल दिइएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।
के यो खेल स्थापना गर्न सुरक्षित छ?
मूलतः, हामीले यहाँ समर्थन गरिरहेका गेमिङ एप्लिकेसन विशुद्ध रूपमा मौलिक छ र कुनै सदस्यता आवश्यक छैन। गेमरहरूले पनि प्रत्यक्ष सिमुलेशन मोडको निःशुल्क मजा लिन सक्छन्। यस क्षण सम्म हामी भित्र कुनै गम्भीर समस्या देख्न असमर्थ छौं।
हाम्रो वेबसाइट पहिले नै विभिन्न सिमुलेशन गेमिङ एपहरूमा धनी छ। ती अन्य सापेक्ष खेलहरूको आनन्द लिन कृपया लिङ्कहरू पालना गर्नुहोस्। जो हुन् कार पार्किंग बीटा एपीके र SpaceFlight Simulator Mod Apk.
यदि तपाईं आफ्नो सपनाको कार चयन गर्न तयार हुनुहुन्छ र कमजोर बिन्दुहरू जाँच गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी गेमरहरूलाई Beamng Drive Apk स्थापना गर्न सिफारिस गर्छौं। त्यो एक क्लिक विकल्पको साथ यहाँबाट पहुँच गर्न सकिन्छ। केवल डाउनलोड लिङ्क बटन चयन गर्नुहोस् र अनन्त मोडहरूको आनन्द लिनुहोस्।
विभाग सिमुलेशन, खेल ट्याग Beamng ड्राइभ एन्ड्रोइड, Beamng ड्राइभ एपीके, Beamng ड्राइभ डाउनलोड, RPG खेल मेल अन्वेषण
एन्ड्रोइडका लागि सुपर चाकू मास्टर एपीके डाउनलोड [खेल]
Sratim TV Apk Android का लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [Movie App]